Khidmadaha adeegga ee loogu talagalay martigelinta iyo dayactirka qorraxda ee OSF - AfricanArXiv way sii wadaa adeegyadeeda - AfricanArXiv
Published by Jo Havemann on 14th February 2020 14th February 2020
'Adeegyadooda caanka ah ee iibiyaasha ayaa wajahaya xidhitaan sabab la xiriirta dhibaatooyin lacageed'
Tani waa cinwaanka shalay maqaalka Nature News kaas oo ka hadlay khidmadaha adeegga OSF.
AfricArXiv waa joogi kartaa halkan!
Waxaan sii wadaynaa adeegyadeena inta lagu gudajiro 2020 waxaana ka shaqeyneynaa qorshe-hawleed iyo istiraatiijiyad maaliyadeed oo lagu sii waddo hawlgallada sannadaha soo socda oo aan ku soo dhajinay AfrikaArXiv muuqaalka kore ee muuqaalka sayniska ee furan ee qaaradda Afrika.
Waxaan diyaarinnay a bogga tabaruca halkan websaydhkeenna iyo olole dadweyne lagu aruurinayo madal-furanka loo yaqaan 'opencollective.com platform'.
oo daboolaya khidmadda martigalinta & dayactirka OSF
qorsheynta, fududeynta, iyo dukumiintiyada nidaamka iyo adeegyada loo yaqaan AfricanArXiv
Taageerada safarka si loogu soo bandhigo AfricanArXiv shirka
Faahfaahin yar oo dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda 'Afrika'
Bisha Juun 2018, annaga wuxuu bilaabay AfricanArXiv isaga oo kaashanaya Xarunta Science Science oo tan iyo markaas la aqbalay ku dhawaad ​​100 qoraal gacmeedyo diyaaradeed iyo waliba dhejimaha, warbixinnada ardayda, iyo isgaarsiinta gaagaaban.
Markay ahayd 2020, Xarunta Sayniska Furan waxay naga codsatay inaan kor u qaadno $ 999.- loogu talagalay martigalinta iyo dayactirka kaabayaasha OSF waxayna gacan ka geysatay soosaarista qaababka iyo soo-jeedinta qoritaanka annaga oo kaashanayna, tusaale ahaan deeq NSF ah iyo a wicitaanka ka yimid barnaamijka Chan Zuckerberg.
Ku dhawaaqida lacagta ayaa nagu kaliftay inaanu isbarbar dhig ku sameyno adeegyada iyo kharashyada si aan nafteena ugu sheegno waxa jira. Waxay si dhakhso ah u cadaatay inaan doonayno inaan siinno wax kabadan hal doorsoor beesheenna si ay ugu shubaan shaqadooda. Waxaannu ugu mahadnaqaynaa COS inay noo soo saartey AfrikaArXiv oo ay inala wadaageen oo naga dhigteen tan imika. Waxaa hadda la joogaa waqtigii aan kobcin lahayn oo aan u fidin lahayn iskaashiga dhinacyada kala duwan ee Science Science iyo Furitaanka Furan si aan uga dhigno mid suurta gal ah oo u dabacsan cilmi-baarayaasha ku nool qaaradda Afrika. Waxaan rabnaa inaan sii wadno safarkaas annagoo wadna COS iyo kaabayaasha OSF, oo bixiya adeegyo kale oo badan oo aan ahayn kaydinta diiwaan-gelinnada hore; saynisyahano sidoo kale waxay ku wadi karaan meertada mashruucooda oo dhan barnaamijka OSF ay ku jiraan xog uruurinta, diiwaangelinta, iyo sameynta.
Waxaan hadda marti galineynaa ku dhawaad ​​100 shaqo oo la aqbalay, inta badan qoraalada gacanta, dhowr bandhig, iyo dhejin.
Qaab-dhismeedka ugu guulaha badan ee la xiriira daah-furka ayaa ah https://osf.io/preprints/africarxiv/y3bp7/ oo leh wax kabadan 1k laguduro
Xitaa haddii dib-u-qaadashada ay tahay mid gaabis ah, u diyaar-garowga waxay helayaan waqti aad iyo aad u sii badan iyada oo ah tallaabo dhammaystiran oo ku saabsan daabacaadda joornaalka. Waxaan la shaqeyneynaa la-hawlgalayaashayada si aan u iftiimino cilmi-baarayaal Afrikaan ah, gaar ahaan, faa'iidooyinka ay diyaarintu u keento isgaarsiinta sayniska adduunka.
Adeegyadu lacag ayey bixiyaan, taasi waa xaqiiq. Waxaan fahamsanahay baahida lagama maarmaanka u ah waxayna caqabad ku tahay qof kasta oo ku lug leh laakiin sidoo kale cashar wanaagsan in la qorsheeyo kaabayaasha macquulka ah oo waarta bilowga. Maaddaama ay muuqaalka waxbarashadu dib u qaabaynayso lafteeda, dhammaan daneeyayaasha waxay u baahan yihiin inay sameeyaan xisaabta oo ay baaraan sida ugu wanaagsan ee loo qaybiyo miisaaniyadda iyo cidda bixinaysa waxa. Ka sokow qiimaha tooska ah ee kaabayaasha, waxaa jira kharashyo kale oo aan toos ahayn oo ku lug leh martigalinta diyaarinta iyo dayactirka, tusaale ahaan adeegyada isku dhafan ee madal ay soo bandhigaan dhinacyada saddexaad, HR, suuq geynta iwm.
Tabarucayaasha, caqabadaha iyo fursadaha
Tan iyo markii la bilaabay, waxaan maalgelinnay Kheyraadkeena shaqsiyadeed (waqti iyo lacag) dhisidda aaladda, oo ay ku jiraan websaydhka iyo gaarsiinta dhagaystayaasha bartilmaameedka ah. Waxaan u maleynaynaa inaysan cilmi baarayaashu aysan aheyn kuwa bixinaya adeegyadeena taas bedelkeedna waxaan gaari karnaa laybareeriyada hay'adaha, dowladaha, aasaaska, iyo deeqbixiyeyaasha - Afrika iyo caalamkaba. Isku soo duuboo, waxaan u dajinay bogga tabaruca at https://info.africarxiv.org/contribute/ waxayna sameynayaan istaraatiijiyad maalgelin iyo qorshe-hawleed sannadka 2020 iyo sannadaha soo socda.
Xaaladda cakiran ee qaaradda darteed, waxaan marka hore baarnay aqoon ku saabsan daneeyayaasha oo waxaan wadahadal la yeelanay khubaro kala duwan. Waxaan rabnaa inaan iskaashi la yeelanno daneeyayaasha Afrikaanka ah ugu horeyn iyo inaan dhameystirno lacagaha tabaruca ah ee caalami ahaan. Bisha Maarso 2020, waxaan hiigsaneynaa inaan bilowno ololeheena isku-ururinta isla markaana aan fileynno in si joogto ah loo helo tabarucaad si aan awood ugu yeelano inaan daboolno kharashyadayada socda oo ay ku jiraan khidmadda OSF ee 2020.
Lacagtu way xadidan tahay gaar ahaan qaaradda Afrika oo adduunka oo dhan waxay ku xidhan tahay qaab-dhismeedka xilligi hore. Iyada oo isgaarsiinta aqoonyahanku u weecato daahfurnaanta iyo dhaqamada sayniska ee furfuran heer caalami waxaan u jeedadeenahay cod xoogan oo mideysan oo ka socda qaarada Afrika si dib loogu habeeyo qaabdhismeedka maalgelinta - tusaale ahaan IOI - https://investinopen.org/.
Caqabadaha la xiriira bixinta kharashaadka
Suuq geyntu waa shaqo badan waxayna ku lug leedahay lacag aad u badan safarada oo saacado badan ayaa la maalgeliyaa si loo hubiyo in daneeyayaasha Cilmi baaristu ay bartaan faa iidooyinka dib-u-dhigga hore ee ay siiyaan bulshada cilmi-baarista. Taasi maahan kiiska kaliya ee Afrika, Latin America, iyo Aasiya laakiin adduunka oo dhan. Caqabadaha kale ee gobolka ka jira waxaa ka mid ah caqabado xagga maaliyadeed ah, mushaharaad hooseeya ee shaqaalaha HE iyo yaraanta kaabayaasha. Inta badan bulshada waxay ku hogaamisaa shaqada si iskaa ah ugudambaynta waraaqaha daabacaadda waxayna leeyihiin kaliya xadidan oo ay ku qabtaan shaqada lagama maarmaanka u ah aruurinta lacagta, taasoo lafteeda iyo meelo kaleba ay tahay shaqo waqti-buuxa ah oo loogu talagalay kooxaha waaweyn.
Istaraatiijiyadda waarista ilaa hadda
Waxaa intaa sii dheer iskaashiga aan la leenahay Xarunta Sayniska Furan (Open for Science Center) si loogu isticmaalo kaabayaasha dhaqaalaha ee OSF, waxaan ku balaarinay aaladdeena annaga oo iskaashanayna sidoo kale Zenodo iyo ScienceOpen. Tani waxay u oggolaaneysaa cilmi baadheyaasha Afrikaanka inay doortaan keydka khariidadda diyaarinta ee ay doorbidayaan oo ku saleysan shuruudahooda:
Sidaas ayaan ku sii wadi doonnaa ka shaqeynta sidii aan u hubin laheyn in adeegyadeena diyaarinta ah ay sii ahaadaan kuwa loogu talagalay bulshada Cilmi baarista Afrika.
Adeegyada gaarka ah iyo kuwa dheeraadka ah iyo dheefaha ay bixiyaan goob kastaa waa lagu qoray https://info.africarxiv.org/submit/.
Zenodo, waxaan u isticmaalnaa koonto bulshada lacag la aan ah in aan dejino oo aan hayno qofkasta oo mowduuc kasta ka hadlaya.
Waxaan la leenahay ScienceOpen heshiis aan u adeegsan karno kaabayaasheeda diyaarinta bilaashka ah sanadka 2020 oo aan dib u qiimeyn ku sameyn doono dhamaadka sanadka. Xagga sare ee xereynta gudbinta, nidaamka dib u diyaarinta ee ScienceOpen wuxuu leeyahay dib u eegis heer sare ah oo isku mid ah kaas oo ku daraya heer adeeg kale.
OSF waxay bixisaa kaydinta xogta dhammaan wareegga cilmi baarista ee mashruuca. Saynisyahannada ayay ku xiran tahay inay doortaan madal ay doorbidaan.
Bilowga hawlgallada AfricanArXiv, himiladeenna muddada fog waxay ahayd in marwalba la abuuro meel lagu marti-geliyo qaaradda Afrika, si isdaba-joog ah loogu sameeyo xarumaha cilmi-baarista ee gobol walba, si loo hubiyo lahaanshaha wax soo saarka cilmi baarista Afrika iyo in la xoojiyo saamileyaasha cilmi-baarista Afrika ee ka-qeybgalka, iskaashiga, iyo isdhaafsiga aqoonta heer caalami ah.
Waxaan gaareynaa dadaallo kale, ururo, iyo la-hawlgalayaal kale si aan tan uga dhigno mid dhab ah dhowaan. Nala soo xiriir si aan uga qaybgalno.
Waxaan diyaarinnay a bogga tabaruca websaydhka oo la diyaariyey Wadajir Furan olole dadweyne.
Labada usbuuc ee soo socda, waxaan bilaabeynaa wacyi gelin istiraatiijiyadeed oo lagula xiriiriyo dalladda tacliinta sare ee Afrika iyo cilmi baarista ku saabsan xubinnimada iyo heshiisyada iskaashiga ah.
Nala soo xiriir si looga doodo fikradaha iyo soojeedinta: info@africarxiv.org.
Tags: Xarunta Sayniska FuranQaab-dhismeedka Sayniska ee Furankhidmada adeegga
Dib u soo noqoshadii bishii Abriil 2018, fikradda ah in la dhiso kaydka bakhaar Afrika ee furan ayaa ku dhashay shirkii ugu horreeyay ee AfrikaOSH ee lagu qabtay Kumasi, Ghana. Daah-ka-qaadista waxaa lagu daboolay luqadda Ingiriisiga ee Nature Index, Quartz Africa, Akhri wax dheeraad ah…